Kukhona imiqondo emithathu eyisisekelo ukuthi sithole impumelelo yokwenza ibhizinisi: inhlanhla, ubuhlakani Umhlahlandlela (umholi) nokuhlela. Futhi uma inhlanhla iyona ikhono ukuba ngesikhathi esifanele endaweni efanele futhi inhlanhla, njengoba wayeyisazi inhloko zimfanelo kungukuthi njalo ithuthukiswe kahle Kwabaningi, ukuhlela kuyinto inqubo ukuthi kungenziwa yingcweti yiwo wonke umuntu futhi ukwakha ibhizinisi lakho kahle futhi umugqa omfushane ukuba bafinyelele imigomo yabo.
Asikhulume kancane mayelana nendlela ukuhlela ngokunembile zembula nomqondo ukuhlela amasu zokumaketha.
Ukuhlela amasu zokumaketha njengoba inqubo yokuhlela sisonke sihlinzekela yosesho kanye ukuhlonza amasu kanye izinyathelo ukuqinisekisa impumelelo yabo esikhathini esinikeziwe isikhathi, ebalwa ekucabangeleni phezu kohlelo esizayo.
Ukuhlela amasu zokumaketha Kufeza indima ebalulekile, njengoba sihilela nokugcina ukulinganisela amasu phakathi amathuba futhi izinjongo ezibekwe lenhlangano (inkampani) ushintsho ezimweni ezimakethe futhi iziphi izici zangaphandle.
Ukuhlela amasu zokumaketha unenjongo - ukuthola futhi ukukhomba izindawo ethembisayo motion yenkampani, okuyinto ukuqinisekisa okuthembekile oqine ekukhuleni kwayo nokuchuma.
Bayalithakasela Isasasa Esinalo ukuhlela kwengqondo kudalwe esinye futhi nekhono ngosizo lwakhe amasu ukulawula ukumaketha, kodwa ngaphandle ukuthi zikhona izizathu eziningi zokuthi kungani ukuhlela ezingeni amasu kuyazuzisa nangempumelelo, sicabanga kubo ngokuningiliziwe.
Esokuqala ukuqonda yokuthi abasebenzi nabaphathi ukuthi yisiphi isakhiwo ibhizinisi (inhlangano inkampani) kusala uhlelo evulekile, futhi imithombo esiyinhloko impumelelo ziphelelwe ibhizinisi.
Okwesibili, kuqinisekisa ukusinda futhi esinye sezici juqu Kulokhu ne lokuncintisana kule ukuhlela amasu ukuthengisa.
Okwesithathu kuyinto ukuhlela ivumela ngozwelo nangokwenza umsebenzi ngendlela ngesikhathi esihle, futhi okubaluleke ngokwanele ukuphendula ezahlukahlukene eziphathelene ukungaqiniseki ingozi imvelo yangaphandle.
Okwesine, unikezwa Ukungaqiniseki inqubo esikhathini esizayo amaphesenti ayikhulu okungenzeka, a ukuhlela amasu ivumela sibonga indlela extrapolation futhi eziningi amathuluzi ukubikezela ukwakha uhlaka ecacile lapho ukuhlonza izingozi ezingase zibe khona futhi ukulahlekelwa, kanye ukuhlonza inzuzo okungenzeka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, besebenzisa i-kuvumelana nezimo ukuhlela kohlelo ungakha ezinezindawo eziningi futhi izinhlelo, okungase ihluke nomunye izinguquko imvelo bangaphandle, ngokulandelana ukuziphatha inhlangano noma yini ngalezo zinguquko.
Ngaphezu kwalokho, omunye izimbangela amasu ukuhlela isikhalazo kukhona okulandelayo: ukuhlela ezingeni enjalo ivumela kusengaphambili ukuthi kungenzeka ekushintsheni ushintsho nokuphathwa kanye ukukhiqizwa, esekelwe ngentuthuko yakamuva kule nsimu. Okusho ukuthi, uma namuhla ezinye ubuchwepheshe kusenzeka, ukuthi ukuphathwa noma imvelo ukukhiqizwa ke usebenzisa idatha kwalo buchwepheshe singancipha kancane aholele inhlangano yakho ukwedlulisela ukuba ubuchwepheshe obufana. It uvumela kakhulu ngaphambi izimbangi abangafuni ukujabulela umqondo ezifana ezintsha ukumaketha isu.
Ukuze afingqe ukuhlela amasu zokumaketha uhlobo Symbiosis, umuzwa ngokuhlanganisa futhi ikhono, ukuhlela kanye imisebenzi abasebenzi ekuzuzeni imigomo eqondile. Lokhu ukuhlela kusekelwe okutholakele ethize yokuhlaziya lezinkathi ngaphambi accounting nentuthuko izinhlelo zibhekelelwe esikhathini esiphakathi futhi iDemo.
Ikhwalithi kunethiwekhi ukusatshalaliswa njengoba isici Izitolo